Otú nyefee Ndi ana-akpo si gam akporo ka Samsung
Otú nyefee SMS, ngwa ọdịnala, Media, oku na ndekọ, Kalinda na Ndi ana-akpo si gam akporo ka Samsung
N'ikpeazụ, ịgbanwee gị ochie Android ekwentị na a ọhụrụ Samsung ekwentị, dị ka Samsung Galaxy S4 ma ọ bụ Cheta 3? Otú ọ dị, gị niile faịlụ dị ka kọntaktị, ka bụ ndị na na ochie Android ekwentị. Ị ga-chepụta ụzọ nyefee faịlụ site na Android ekwentị Samsung mbụ. Ọ bụrụ na nke ahụ bụ ihe ị mkpa, luckily, ị na-nri ebe. Isiokwu a na-aga ịkọrọ gị a haziri n'ụzọ pụrụ iche Android ka Samsung transfer software - na Wondershare MobileTrans.
Otu Pịa nyefee faịlụ si gam akporo ka Samsung
The Android ka Samsung transfer software ike gị nyefee ngwa, ederede ozi, photos, music, videos, oku na ndekọ na kọntaktị site na Android ka Samsung ekwentị ma ọ bụ mbadamba na ala.
Nyefee kọntaktị niile, gụnyere ọbụna ndị na Google akaụntụ, Twitter, Facebook, wdg;
Detuo zuru na Ama kọntaktị, dị ka adreesị ụlọ, adreesị ozi-e, Job aha, ụlọ ọrụ aha na ndị ọzọ;
Ịkpali ngwa, kalenda, music, photos, videos, oku na ndekọ na ozi ederede site na Android ka Samsung;
Arụ ọrụ nke ọma ịkwaga data ka Samsung site Samsung, Motorola, HTC, LG, Sony na na;
Sapeta Wondershare MobileTrans maka Mac mgbe eji a Mac kọmputa.
Ndenye na-adaba adaba
Ọ dịghị mgbagwoju nzọụkwụ. Kama nke ahụ, nanị otu click, na kọntaktị niile ga-akpali site na Android ekwentị Samsung. Ọ pụghị ịbụ mfe.
All Ndi ana-akpo agafere
The software-enyere gị nyefee ma kọntaktsị na a kaadị ebe nchekwa ekwentị na akaụntụ, dị ka Google, Facebook, Twitter, ọhụrụ gị Samsung ekwentị.
Ọ bụghị naanị na Nyefee Ndi ana-akpo
Ọ bụghị naanị na kọntaktị, software na-enyere aka nyefee ngwa, kalenda, ederede ozi, oku na ndekọ, photos, music na vidiyo na oge.
Ọ bụghị naanị na Samsung
Na software, ị nwere ike mfe idetuo data ọ bụla na Android ekwentị, dị ka HTC, Sony, LG, Huawei, Motorola gị Samsung ekwentị. Ọzọ akwado Android ngwaọrụ >>
Ịgbanwee Android ka Samsung
Copy iPhone ka Samsung
Nyefee Nokia ka Samsung
Otú nyefee Data si gam akporo ka Samsung
1. Ihe ndị ị na mkpa: Your Samsung ekwentị na ndị ọzọ na Android ekwentị, abụọ USB cables, a Windows kọmputa, Wondershare MobileTrans 2. Banyere kọntaktsị na ihe ndekọ: Iji nyefee kọntaktsị na ígwé ojii, ị kwesịrị abanye n'ime ihe ndekọ na isi iyi Android ekwentị tupu ebufe. Bụrụ na ọ bụghị, adịghị abanye n'ime ihe ndekọ ebe kọntaktị gị na-azọpụta.
Nzọụkwụ 1. Gbaa ndị Android ka Samsung Nyefee Software
Download Wondershare MobileTrans na kọmputa na wụnye ya. Na-agba ọsọ ya. Mgbe ya isi window-abịa si, pịa Malite ime na.
Nzọụkwụ 2. Jikọọ gị Samsung ekwentị na akporo ekwentị na kọmputa
Jikọọ gị Samsung ekwentị na ndị ọzọ na Android ekwentị na kọmputa na USB cables. Mgbe achọpụtara, ma igwe-egosi na MobileTrans window, dị nnọọ ka screenshot egosi na nri.
Nzọụkwụ 3. Nyefee SMS, Kalinda, ngwa ọdịnala, Music, oku na ndekọ, Video, Photos na Ndi ana-akpo si gam akporo ka Galaxy S3 / S4 / Cheta 3/2 na Ọzọ
Ọ bụ doo anya na ị nyefee kọntaktsị, kalinda, ngwa, music, SMS, videos, foto na oku na ndekọ site na otu Android ekwentị gaa na Samsung ekwentị n'out oge. Ọ bụrụ na nke ahụ bụ ihe ị chọrọ, dị nnọọ pịa Malite Copy. Ọ bụrụ na ị dị nnọọ kpebie detuo kọntaktị si gam akporo ka Samsung, ị kwesịrị ị na uncheck ndị ọzọ faịlụ ma e wezụga na kọntaktị na pịa Malite Copy.
Nyefee Nokia Ndi ana-akpo ka Samsung
Ịgbanwee si iOS ka Samsung
Nyefee faịlụ site Blackberry ka Samsung
Bugharịa Photos si iPad ka Samsung
Wụnye / Update / Uninstall Kies on Mac
TOP 5 uzo ozo maka Samsung njikọ
Top 10 Android ROMs na Android ROM Managers
> Resource> Android> otú nyefee SMS, ngwa ọdịnala, Media, oku na ndekọ, Kalinda na Ndi ana-akpo si gam akporo